Vavaka mahery vaika amin'ny fahagagana isan'andro | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka mahery vaika amin'ny fahagagana isan'andro
Vavaka mahery vaika amin'ny fahagagana isan'andro
Desambra 18, 2020
Androany isika dia hiatrika vavaka mahery ho an'ny fahagagana isan'andro. Iza no tsy mila fahagagana? Ny fahagagana dia tranga iray izay tsy nampoizintsika indrindra. Efa mba sendra toe-javatra toa tsy nitovizan'ny rehetra taminao ve ianao? Rehefa mieritreritra ianao fa tsy afaka nihatsara ny toe-javatra, dia tonga amin'ny fanampiana tsy nampoizinao ny fanampiana.
Ny fihaonana teo amin'ny mpitondratena tao Zarefata sy ny mpaminany Elia dia tsy fahagagana fotsiny. Ilay mpitondratena mahantra sy ny zanany lahy dia saika hanana ny sakafony farany rehefa tonga tao an-tranony ilay mpaminany. Nangataka ny hanomana ny sakafony aloha i Elia. Ny zavatra iray tsy maintsy takatsika momba ny fahagagana dia ny fankatoavana. Na dia mivavaka mafy amin'ny fahagagana isan'andro aza isika dia zava-dehibe ihany koa ny hianarantsika ny fomba hankatoavana ny torolàlana omena antsika. Raha tsy nankatò an'i Elia ny mpitondratena tao Zarefata, dia tsy ho voatahy be loatra. Nanomana ny sakafon'i Elià izy, ary rehefa hitany fa tapitra ho azy io dia notahin'i Jehovah be dia be izy.
Misy ny sasany amintsika izay tsy nahita fahagagana afa-tsy indray mandeha na indroa teo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra dia vonona hatrany hanao zava-mahatalanjona eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ny fahagagana isan'andro dia ny tsy hisasaranao hamita zavatra; tsy hijaly ianao hahazoana zava-bita miavaka. Na dia nolavina aza ny hafa dia hankalazaina any ianao. Fahagagana izany. Ny tena zava-dehibe, rehefa miditra amin'ny taona vaovao isika dia mila ny fahagagana rehetra mety ho azontsika.
Ny tantara Covid-19 dia mitombo saika amin'ny firenena rehetra manerantany. Firenena maro no efa mieritreritra ny handeha hidin-trano fanindroany satria manantena izy ireo fa hiakatra mihoatra ny voalohany ny onjan'ny virus. Mila ny fahagagana ataon'Andriamanitra isika mba hiaina fiainana milamina amin'ny taona 2021. Mandidy izany amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho; Andriamanitra hanome anao mandrakariva ny zavatra ilainao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao mila fahagagana, enga anie ny herin'Andriamanitra Tsitoha hanaitra anao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fanomezana fiainana, misaotra anao aho noho ny fahasoavana nomenao ahy nahita andro mahafinaritra hafa nataonao, Tompoko hasandratra amin'ny anaran'ny Jesosy ny anaranao.
Ray Tompo ô, amin'ny zava-dratsy mitranga rehetra manodidina, ny fihanaky ny viriosy, ny fahaketrahan'ny toekarena, dada, mivavaka aho mba hanohana ahy amin'ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavanao.
Ry Jesosy Tompoko, amin'ny lafiny rehetra izay ilan'ny fahagagana fahagagana, raiko, mivavaka aho mba hataonao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahagagana ataonao. Amin'ny toerana rehetra nandavana ahy, Tompoko ny fahasoavana hankalazaina, avelao ho tonga amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hizaha famindram-po avy any an-danitra, ary hositraninao amin'ny anaran'i Jesosy ny aretiko rehetra. Mivavaka aho mba hikitika ny faritra rehetra amin'ny fiainako izay mila mikasika ny anaran'i Jesosy ny herinao sy ny fahasoavanao.
Jesosy Tompo ô, nentinao tamin'ny hazofijaliana ny rofinay rehetra. Mivavaka aho mba hositraninao amin'ny areti Jesosy ny rofiko rehetra. Tompoko, ny karazan-aretina sy aretina rehetra dia alaina amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hahazo an'i Joba masina. Ary hoy ny Soratra Masina: Andriamanitro hamatsy izay ilaiko rehetra, araka ny haren'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Miresaka ny taratasiko momba ny asa aho amin'ny fisehoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny fikambanana rehetra izay nolaviko, ny fahasoavana izay hanambara ahy ho amin'ny fahamboniana dia aoka ho tonga amiko amin'ny anaran'i Jesosy io.
Tompoko, mivavaka aho mba hilaiko amin'ny lalana rehetra sy fitarihana amin'ny fiainako ny vavaka, mivavaka aho mba homenao ahy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Mandà ny fiainako miorina amin'ny fahalalako olombelona aho; Mandà ny hitantana ny fiainako mifototra amin'ny fitsapana sy ny lesoka aho; Mivavaka aho mba hanomezanao ahy ny fanahinao izay hampianatra sy hikolokolo ahy, avelao hitranga amiko amin'ny anaran'i Jesosy izany.
Ry Jesosy Tompo ô, ny soratra masina dia nilaza hoe: Rehefa nivoaka avy tany Egypta ny Isiraely, ny mpianakavin'i Jakoba avy tamin'ny firenena hafa fiteny; Joda no fitoerany masina, Isiraely no fanjakany. Nahita izany ny ranomasina ka nandositra; Nentina niverina i Jordana. Ary ny tendrombohitra dia nifalihavanja tahaka ny ondrilahy, ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry. Mandidy araka ny herin'ny Avo Indrindra aho, ny olana rehetra amin'ny alehako dia tokony handositra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afon'ny Fanahy Masina dia manimba ny sakana rehetra manohitra ahy.
Tompoko, mivavaka aho mba hahombiazan'ny fanambadiana. Voatahy amin'ny anaran'i Jesosy ny zanako. Manome lalàna amin'ny lafiny rehetra aho fa niandrandra ny fahagagana nataon'Andriamanitra momba ny fanambadiako; Andriamanitra dia mandahatra izany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko, amin'ny lafiny rehetra, mitady ny fitahiana ho anao aho, raiko, mivavaka aho mba hitahianao ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ny hisian'ny lanitra fitahiana misokatra aho. Mandidy aho fa ny fitahianao dia tonga amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, amin'ny zavatra rehetra ilain'ny fiainako ny fankasitrahanao dia sitrakao aho amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa miatrika ny atsinanana aho, avelao aho hahita fitia. Rehefa miatrika ny andrefana aho, avelao ny fitahianao hanaraka ahy rehefa mandeha Avaratra aho, ho amiko ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra hoe: Izaho hiantra izay hamindrako fo sy hiantrako izay itiavako azy. Ray Tompo ô, mivavaka aho mba ho isan'ireo izay hanana ny famindram-ponao Tompoko ho mendrika ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko, amin'ny lafiny rehetra ilain'ny fiainako ny fahagagana ataonao, na momba ny fahasalamako, ny fanambadiako, ny asako na ny fianarako, Tompoko, mivavaka aho mba hataonao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahagagana ataonao. Andriamanitra, Andriamanitra miasa fahagagana ianao. Mivavaka aho mba hitranga amin'ny fiainako anio ny fahagagana amin'ny ora fahiraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompoko, isan'andro isan'andro amin'ny fiainako, apetraho amiko ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy.
fahagagana mahery vavaka fahagagana
Vavaka hahazoana fahagagana
Previous lahatsoratraFanambarana mahery vaika Nandritra ny 2021
Next lahatsoratraVavaka ho an'ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny 2021
Emmanuel Dickson 29 Desambra 2020 Amin'ny 10:51 alina
Mankasitraka anao aho noho ireo teboka vavaka ireo.
Sottie Evans 5 Janoary 2021 Tamin'ny 7:12 maraina
Hevitra vavaka mahafinaritra
Okpala fanantenana 9 Janoary 2021 Tamin'ny 9:29 maraina
Misaotra betsaka noho ireo teboka vavaka ireo
Mananasy 12 Janoary 2021 Tamin'ny 4:40 maraina
Amena 🙏 amin'ny anaran'i Jesosy no itakiantsika sy didinay ary fanapahanay ary manome dera sy voninahitra ray mamaly ny vavakay ao amin'i Jesosy anarana mahery sy sarobidy izay kasihinay dia ekena ary raisinay izany Amelo aleloia
Fukah Gibson 13 Janoary 2021 Tamin'ny 4:48 maraina
Misaotra anao amin'ireto teboka vavaka mahafinaritra ireto mba hitombo hatrany Andriamanitra tompoko
Boby Mathew 1 Febroary 2021 Amin'ny 3:03 maraina
Misaotra anao noho ireo vavaka mahery
Torohevitra ho an'ny tsingerin-taona nahaterahan'ny mariazy
Vavaky ny fanentanam-panahy amin'ny fotoan'ny famoizam-po
Vavaky ny famonjena amin'ny toerana mena
Novambra 27, 2019
Teboka vavaka ho an'ny toerana avo kokoa